International Campaign for Freedom of Aung San Suu Kyi and Burma: Statement: Civil Societies’ Review on Myanmar’s Transition Process: Prospects for 2015 and Beyond by Myanmar Civil Society Organizations Forum
Statement: Civil Societies’ Review on Myanmar’s Transition Process: Prospects for 2015 and Beyond by Myanmar Civil Society Organizations Forum
Civil Societies' Review on Myanmar's Transition Process: Prospects for 2015 and Beyond
We, more than 650 representatives from 257 organizations and networks in Myanmar, came together in Yangon for3days from 14-16 October 2014 to exchange opinions, debate and to assessawide range of issues currently confronting Myanmar in the context of recent political developments and the transition process that started in 2011.
Myanmar is going throughapivotal stage in its history. Positive steps have been taken during the reform process as the country saw the release of hundreds of political prisoners including people's leader, Daw Aung San Suu Kyi, ethnic leaders and leaders of the 88 Generation, as well as the signing of ceasefires with the majority of ethnic armed groups, the establishment of Parliament, the creation of the Myanmar National Human Rights Commission, and the loosening of media restrictions. Yet decades old challenges remain, and emerging issues have served to complicate the reform process and put the country at great risk. This forum was initiated with the purpose of reviewing the transition process in order to comprehend the current situation and to provide space for discussion on future collaboration between Myanmar Civil Society Organizations (CSOs).
We urge the Myanmar Government and international community to implement the following discussion points and recommendations made withaview to ensuringasmooth transition to democracy, peace and national reconciliation and the well-being of the people who have been suffering for more than 60 years.
During the 3-day forum, potential solutions for6main issues, Law Reform, Peace and Conflict, Media, Hate Speech and Communal Violence, Parliament, Government and Accountability, Economic Reform and Foreign Direct Investment, International Community's Role and Involvement, were discussed under6panel discussions and workshops. Despites the claims that steps have been taken for the transition, after reviewing and assessing the situation thematically and geographically, we have concluded that there have been very limited positive changes and in some cases situations have regressed.
The current transition process has little transparency and is controlled by the government without democratic and meaningful inclusion of democratic opposition forces, ethnic forces, civil society and the people. The liberalization of the economy in the context ofabroken legal framework is creating many negative social and environmental impacts as floods of money flow in from abroad. Much of the country still lives in poverty, while the benefits of the economy opening up has mainly benefitted the elite class, many of whom are crony businessmen connected to the Government and/or the Army. Thus many local communities across the country are experiencing the loss of home, land, livelihood, health, education, social security and natural resources in the name of development supposedly for the people and for poverty reduction. The lack of fair land rights and investment laws has resulted in nationwide land confiscations and new large-scale projects being planned and implemented by businesses in partnership with the Government without consultation with the local people.
It is not only pre-transition laws but also new laws such as the notorious Article 18 of the Peaceful Assembly and Procession Law that are being used asatool for repression. Furthermore, land laws, labour laws, education laws, Myanmar National Human Rights Commission laws and other proposed draft laws only serve to pose restriction on gender equality and religious freedom and do not protect human rights or benefit the people. These laws were processed and approved without the involvement of the concerned civil society and population.
The peace process has stalled after the signing of preliminary ceasefire agreements in late 2011 and there has been fighting in Kachin and Northern Shan State since. There has beenacontinuation of different human rights violations including torture, extrajudicial killings, arbitrary arrests and rape and sexual assault.
Parties continue to disagree over the proposed nationwide ceasefire agreement and the peace process. Although the process has been on-going for 12 months it is still fragile and there has been almost no participation of civil society, women and youth. Meanwhile in non-ceasefire areas, fighting has resumed. Our analysis of these fighting is that there isaconnection between those clashes and investment projects. Furthermore, there has beenagrowing anxiety about the return of Internally Displaced Persons (IDPs) who have been displaced by the continuation of armed conflicts and widespread land confiscations and the existing refugees on the Thailand-Burma border.
Little has been done to realizeatruly democratic system in the country, yet oppressive activities over civil societies have increased. The optimism over loosening of media restrictions has been replaced withafamiliar fear, as journalists are being arrested under criminal charges. New media laws limit freedom of expression and allow the Government to have control. Moreover, threats, arrests and sentencing of journalists has further encouraged self-censorship and silence on controversial issues. Most political prisoners were released but some remain behind bars while many more are being arrested.
The act of spreading hate speech and incitement of ethnic and religious conflict across the country since 2011 has reached an alarming point, yet there has been no action taken by the government and findingasolution to the problem still seems too difficult.
Parliament is no more than window-dressing without the ability to address the major challenges facing judicial reform and rule of law and hasalong way to go in terms of reaching full democratic debate on key issues.
Meanwhile, under the 2008 Constitution, the Burma Army retains 25% of seats in Parliament, thereby ensuring an effective veto on any democratic, and constitutional amendments. Myanmar cannot be said to have genuine democracy until the 2008 Constitution is amended and Parliament is fully elected by the people. Furthermore, the judiciary is not at all independent from the influence and management of the executive branch of Government and the Army as judicial and executive personnel at different levels are from the Army. The result is the lack of rule of law andawidespread deep-rooted impunity.
However, many of the common discourses and actions that we see in the international community have not addressed such issues confronting the transition and some of them have led to unnecessary negative impacts due to the lack of serious consideration about the situation in Myanmar.
Governments around the world have now become much more involved with Myanmar and provide political and technical support as well as support for peace and development. Although the significant increase in the presence of international non-governmental organizations (INGOs) has contributed to the increase in aid and assistance to the peace process, social security, development and other sectors, benefits to the grassroots population has been minimal due to limitations in effectiveness. Furthermore, the prioritization of individual agendas over local processes by the INGOs without enough consultation has undermined the role and capacity of local organizations. INGOs' support to local CSOs have been ineffective and there have been cases where double standards are applied.
To Government of the Union of Myanmar
We urge the government of Myanmar:
To release all political prisoners including farmers, democracy and human rights activists arrested during the transition period and the previous regime unconditionally
To implement promises made to the people of Myanmar and the international community during the reform process with full responsibility and accountability
To holdareferendum to amend the 2008 Constitution which was approved without the will of the people, to be in line with democratic principles before 2015
To provide the people with easy access to all legislation including the Election Law and to execute activities to improve the knowledge of the people on the legal system
To allow State and Region Governments to be elected by corresponding State and Region parliaments and to maintain full power
To createaspace for opposition forces and civil society to have meaningful participation in the transition
To abolish or repeal oppressive laws including, land laws, peaceful assembly and procession laws, education laws, and labour laws, and to lay down policies and legislate new laws that serve the people in compliance with democratic and human rights principles and to allow relevant stakeholders (e.g. farmers, workers, students, women and refugees) to fully participate in every level of the legalisation processes
To perform judicial reform including allocation of sufficient benefits to judiciary personnel and to reform judicial bodies, and make new appointments that truly represent the people if needed
To amend the enabling law of Myanmar National Human Rights Commission to be in full compliance with the Paris Principles that provides the commission with full protection mandate to perform investigations on all people freely including police and members of the Tatmadaw and carry out effective consultation with civil society and to establish an independent accountability mechanism
To set and persistently work on the peace process asapriority for achieving national reconciliation, democracy andafederal union, and to an create enabling environment andamechanism for participation of important population groups including women and youth
To take responsibility for the continuation of peace process negotiations
To cease from implementing large scale investment projects across the country, including the border areas, that do not benefit the people in the country and to stop on-going projects should the people wish so
To lay out and implement policies that protect the people from negative impacts of investment
To cease activities that put pressure on the refugees to return prematurely before genuine peace is achieved and to carry out consultation with the refugees and refugee community based organizations on the issue of return
To conduct multi-religion forum atanational level, to take effective actions against the spreading of hate speech and to execute an educational campaign to stop the spread of hate speech
To cease from imposing restrictions on any religion and to provideasafe and secure environment for people of all religions in the country
To collect information about youth and lay out youth policies, and to allocate sufficient budget and allow youth to take the lead in the implementation of these policies
To repeal all existing laws including the 2008 Constitution that discriminate against women and to legislate new laws in compliance with CEDAW
To International Governments
We urge international governments:
To make effective adjustment and provide support to aidapeople-led transition process that can bring genuine change for the people
To take serious consideration of the complexity of the politics of the peace process of Myanmar, the relation between businesses, developments, investments and armed conflicts and to adopt "do no harm" policy in all forms of engagement with the Government of Myanmar including collaboration between states, provision of aid and assistance, and business investments
To comply with international principles including the principle of Free, Prior and Informed Consent (FPIC) to avoid human rights abuses and other negative impacts related to investment
To provide knowledge and publicize laws and legislation of investing country to the people of Myanmar
To strongly encourage the Government of Myanmar to fulfil its promises
We urge the United Nations
To strongly encourage the government of Myanmar to implement its promises and international obligations provided under different international instruments including CEDAW, CRC, and UN Security Council Resolution 1325 and 1820
To strongly encourage the government of Myanmar to make the reform process transparent and inclusive of people and civil society
To maintain resolutions of General Assembly and Human Rights Council on the situation of Human Rights in Myanmar
To International Non-Governmental Organizations
We urge the international non-governmental organizations
To continue aid and support programs and capacity building initiatives, while operating in compliance with international humanitarian and human rights principles, and to avoid activities that can lead to increased conflict
To respect and acknowledge the capacity, equal entitlement and the important role of local civil society organizations
To support processes that have emerged from consultations with local organizations and people as opposed to prearranged activities
Dowload the statement in English here
Aung Myo Min – 09 448015306
Khin Lay – 09 256080897
U Thein Lwin – 09 73255563
Esther – 09 43068063
Khin Ohmar – 09 450063714
Thein Ni Oo – 09 5099096
Saw Tun Tun – 09 73134424
၁၇ ရက်၊ အောက်တိုဘာလ၊ ၂၀၁၄
ဦးအောင်မျိုးမင်း - ၀၉ ၄၄၈၀၁၅၃၀၆
မခင်လေး - ၀၉ ၂၅၆၀၈၀၈၉၇
ဦးသိန်းလွင် - ၀၉ ၇၃၂၅၅၅၆၃
အက်စတာ - ၀၉ ၄၃၀၆၈၀၆၃
မခင်ဥမ္မာ - ၀၉ ၄၅၀၀၆၃၇၁၄
မသိန္နီဦး - ၀၉ ၅၀၉၉၀၉၆
စောထွန်းထွန်း - ၀၉ ၇၃၁၃၄၄၂၄
အရပ်ဘက်လူထုအဖွဲ့အစည်းများမှ မြန်မာနိုင်ငံအသွင်ကူးပြောင်းရေးဖြစ်စဉ်အပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် နှင့် အလွန် ဖြစ်နိုင်ခြေအလားအလာများ
၁၄ - ၁၆ အောက်တိုဘာလ၊ ၂၀၁၄
မြန်မာနိုင်ငံခရစ်ယာန်မျက်မမြင်များမိတ်သဟာရ၊ ခ၀ဲခြံ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့
မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ်မှ အရပ်ဘက်လူထုအဖွဲ့အစည်းနှင့် ကွန်ယက်များစုစုပေါင်း၂၅၇ ဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ် များ စုစုပေါင်း ၆၅၀ ကျော်တို့သည် ရန်ကုန်မြို့တွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်မှ ၁၆ ရက်နေ့အထိ ၃ ရက်ကြာ တွေ့ဆုံ၍ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ စတင်ခဲ့သော နိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုနှင့် အသွင်ကူးပြောင်းမှု အခင်းအကျင်းအောက်တွင် ပြည်သူများ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသောစိန်ခေါ်မှုများ၊ ဖြစ်နိုင်ခြေ အန္တရယ်များနှင့် ပတ်သက်သော အမြင်သဘောထားဖလှယ်ခြင်း၊ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေး သုံးသပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
လက်ရှိကာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် နိုင်ငံ၏သမိုင်းအတွက် အလွန်အရေးကြီးသော အခြေအနေကို ဖြတ်သန်းနေရပါသည်။ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များနှင့် ၈၈' မျိုးဆက် ခေါင်းဆောင်များအပါအဝင် ရာနှင့်ချီသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ပြန်လည်လွတ်မြောက် လာခြင်း၊ အဓိကတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်များ ရေးထိုးခြင်း၊ လွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် သတင်းမီဒီယာအပေါ် ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်မှုများအား ဖြေလျော့ပေးခြင်း စသည့် အပြုသဘောဆောင်သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ပေါ်ထွန်းလာခဲ့သည်။ သို့သော် အချို့သော ယခင်ဆယ်စုနှစ်များစွာမှ စိန်ခေါ်မှုများမှာ ယနေ့တိုင် ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည့်အပြင် ထပ်မံကြုံတွေ့နေရသော စိန်ခေါ်မှုအသစ်များကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသွင်ကူးပြောင်းရေးသည် ပိုမိုရှုပ်ထွေး၍ အန္တရယ်ကြီးမားသော အခြေအနေကို ဦးတည်နေသည်။ ထို့ကြောင့် အခြေအနေမှန်ကို နားလည်နိုင်ရန် အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ် မှုများ ပြုလုပ်၍ မြန်မာ့အရပ်ဘက်လူထုအဖွဲ့အစည်းများကြား အနာဂတ်တွင် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရေး ဆွေးနွေးသွားရန် ဤနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကို ကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဤနှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှတဆင့် နှစ်ပေါင်း (၆၀) ကျော် ဒုက္ခခံလာခဲ့ရသော ပြည်သူများ၏အကျိုးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေချောမွေ့အောင်မြင်စေရန် ရည်စူးကာ အောက်ပါဆွေးနွေးချက်များနှင့် အကြံပြုချက် များကို လက်ရှိအစိုးရနှင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းမှ ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ပေးရန် တင်ပြတောင်းဆိုပါသည်။
ဤသုံးရက်တာ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွင် ခေါင်းစဉ်ကြီးခြောက်ခုကို စင်တင်စကားဝိုင်း ၆ ခု၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ၆ ခုဖြင့် ဆွေးနွေးအဖြေရှာခဲ့ကြသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင် သည်ဟုဆိုသော်လည်း ကဏ္ဍအသီးသီး ဒေသအသီးသီးရှိ အခြေအနေများကို ပြန်လည်လေ့လာ သုံးသပ်ကြည့်သောအခါ အကောင်းဘက်သို့ဦးတည်သော ပြောင်းလဲမှုများ အလွန်အားနည်းနေပြီး အချို့အခြေအနေများတွင် ပိုမိုဆုတ်ယုတ်သွား သည်ကိုတွေ့ရသည်။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ အသွင်ကူးပြောင်းရေးဖြစ်စဉ်သည် ဒီမိုကရေစီ အတိုက်အခံအင်အားစုများ၊ တိုင်းရင်းသားအင်အားစုများ၊ အရပ်ဘက်လူထုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်သူလူထုမှ ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းအရ အဓိပ္ပါယ်ရှိသော ပါဝင်ခွင့်မရပဲ အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်သာရှိပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အလွန်အားနည်းနေသည်။
ပျက်စီးယိုယွင်းနေသော တရားရေးမဏ္ဍိုင်အောက်တွင် တံခါးဖွင့်စီးပွားရေးမူဝါဒကြောင့် ပြည်ပမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ငွေကြေးများ အလုံးအရင်းနှင့် ဝင်ရောက်လာကာ လူမှုရေးနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ စီးပွားရေးလွတ်လပ်ခွင့်သည် အစိုးရ သို့မဟုတ် စစ်တပ်နှင့် ဆက်နွယ်သော လက်ဝါးကြီးအုပ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ခရိုနီ အများစုပါဝင်သည့် ချမ်းသာသော လူတန်းစား ကို အကျိုးပြုနေချိန်တွင် အများစုသော ပြည်သူလူထုကြီးမှာ ဆင်းရဲပင်ပန်းစွာ နေထိုင်နေရဆဲ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် တိုင်ပြည်တစ်ဝှမ်းရှိ ဒေသခံလူထု အများအပြားသည် ပြည်သူ့ဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ဆင်းရဲမွဲတေမှုလျော့ချရေး ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် မိမိတို့၏ အိုးအိမ်၊ မြေယာများ၊ ကျန်းမာရေး ပညာရေး လူမှုဘဝလုံခြုံရေး၊ အလုပ်သမား၊ လယ်သမားအခွင့်အရေး၊ အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းလုပ်ငန်းများနှင့် သဘာဝသယံဇာတများ ဆုံးရှုံးနေရလျက်ရှိသည်။ တရားမျှတသော မြေယာဥပဒေများနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေများ မရှိခြင်းကြောင့် နိုင်ငံတစ်ဝန်း မြေယာသိမ်းဆည်းမှု အမြောက်အများ ဖြစ်ပေါ်နေလျက်ရှိပြီး အစိုးရနှင့်အကျိုးတူ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များသည် ဒေသနေလူထုများနှင့် လုံလောက်သော ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်းမရှိပဲ အကြီးစားစီမံကိန်း သစ်များအတွက် အစီအစဉ်ချမှတ်မှုများ၊ ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်မှုများ ပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။
အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလမတိုင်ခင် ဥပဒေများသာမဟုတ်ပဲ ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခြင်းနှင့်စီတန်း လှည့်လည်ခြင်း ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၈ ကဲ့သို့ ဥပဒေများကို ဖိနှိပ်သောကိရိယာ များအဖြစ် အသုံးပြုနေသည်။ ထို့ပြင် မြေယာဥပဒေများ၊ အလုပ်သမားဥပဒေများ၊ ပညာရေးဥပဒေများ၊ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ဥပဒေများအပြင် ကျားမတန်းတူရေးနှင့် ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကို ကန့်သတ်ထားသော ဥပဒေကြမ်းများသည်လည်း ပြည်သူလူထု၏ လူအခွင့်အရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ပေးခြင်း မရှိသည့်အပြင် ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းခြင်း လုပ်ငန်းများတွင် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်သူလူထုနှင့် အရပ်ဘက် လူထုအဖွဲ့အစည်းများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်ခွင့်များ အကြံပြုတင်ပြခွင့်များ မရရှိခဲ့ပေ။
၂၀၁၁ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှစတင်ခဲ့သော ပဏာမအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်များနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်သည် ရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်ပဲဖြစ်နေပြီး ကချင်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းများတွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လမှ ယနေ့အချိန်အထိ တိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေလျက်ရှိသည်။ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများ၊ တရားစီရင်မှုမရှိသော သတ်ဖြတ်မှုများ၊ တရားလက်လွတ် ဖမ်းဆီးမှုများနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုများ အပါအဝင် အခြားလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်နေလျက်ရှိသည်။
လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသူများသည် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး အဆိုပြုချက်များအပေါ် သဘောထားကွဲလွဲမှုများ ဆက်လက်ရှိနေပြီး ဆွေးနွေးမှု များသည် (၁၂) လ အထိ ကြာမြင့်ပြီဖြစ်သော်လည်း လက်ရှိအချိန်အထိ အရပ်ဘက်လူထုအဖွဲ့ အစည်းများ၊ အမျိုးသမီးနှင့် လူငယ်များ၏ ပါဝင်မှု မရှိသလောက် အားနည်းခဲ့ပြီး ကျိုးပျက်လွယ်သော အခြေအနေတွင် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ အပစ်ရပ်ထားပြီးသော နေရာများတွင်လည်း တိုက်ပွဲများ ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပြီး တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားရာ ဒေသများနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီမံကိန်းများ ဆက်စပ်လျက် ရှိကြောင်း သုံးသပ်ပါသည်။ ထို့ပြင် တိုက်ပွဲများ၊ ရင်းနှီမြှုပ်နှံမှုများနှင့် မြေယာသိမ်းယူမှု များကြောင့် ပြည်တွင်း နေရပ်စွန့်ခွာ ဒုက္ခသည်များ ပိုမို တိုးလာသည့်အပြင် ၎င်းတို့နှင့် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ ဒုက္ခသည်ပြည်သူလူထုများအား နေရပ်ပြန်လာရေး ကိစ္စရပ်များအပေါ် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများစွာ ဖြစ်ပေါ်နေရသည်။
ဒီမိုကရေစီစနစ် ဖော်ဆောင်နိုင်မှု မရှိဘဲ အရပ်ဘက်လူထုအဖွဲ့အစည်းများအပေါ် ဖိနိပ်ချုပ်ချယ်မှုများ မြင့်မားလာလျက်ရှိသည်။ သတင်းထောက်များကို ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ပုဒ်မများဖြင့် ဖမ်းဆီးအရေးယူမှုများကြောင့် ယခင် သတင်းမီဒီယာအပေါ် ကန့်သတ်မှုများ ဖြေလျော့ပေးခဲ့သည်ဟူသော အမြင်အစား စိုးရိမ်မှုများက အစားထိုး နေရာယူလာသည်။ မီဒီယာဥပဒေသစ်များသည် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကို အပြည့်အဝခွင့်ပြုခြင်းမရှိပဲ အစိုးရမှ ဆက်လက်ချုပ်ကိုင်နိုင်အောင် ပြဋ္ဌာန်းပေးထားသည်။ ထို့ပြင် ခြိမ်းခြောက်မှုများ ဖမ်းဆီးမှုများနှင့် ဒဏ်ခတ်မှုများကြောင့် မီဒီယာ အသိုင်းအဝိုင်းအကြား အငြင်းပွားဖွယ်ရာ အကြောင်းအရာများအပေါ် ရေးသားရာတွင် စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့မှုများနှင့် မိမိကိုယ်ကို ဆင်ဆာဖြတ်တောက် မှုများ ဖြစ်စေရန် တွန်းပို့ပေးနေသည်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အများစုလွတ်မြောက်လာသော်လည်း အချို့မှာ ဆက်လက်အကျဉ်းကျနေဆဲဖြစ်ပြီး ထပ်မံ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှုများလည်း အများအပြား ရှိနေသည်။
ထို့ပြင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝှမ်း အမုန်းစကားပြန့်ပွားမှုများနှင့် ဘာသာရေးအစွန်းရောက် အုပ်စုများ၏ လူမျိုးရေးနှင့်ဘာသာရေး ပဋိပက္ခများဖြစ်ပေါ်လာအောင် လှုံ့ဆော်မှုများမှာ စိုးရိမ်ဖွယ် အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနေသော်လည်း အစိုးရမှ တစ်စုံတစ်ရာ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပဲ ပြဿနာ၏ အဖြေကို ရှာဖွေရန် အလွန်ခက်ခဲနေဆဲဖြစ်သည်။
လွှတ်တော်များသည် ဟန်ပြလွှတ်တော်များသာဖြစ်ပြီး တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တရားရေးကဏ္ဍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စများ၏ အဓိကစိန်ခေါ်ချက်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းမရှိသည့်အပြင် ဒီမိုကရေစီကျသော အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာရန် အလှမ်းဝေးနေဆဲဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ လွှတ်တော်၏ ၂၅% ကို တပ်မတော်က ရယူထားသည့်အတွက် ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကျသည့် မည်သည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး ဆောင်ရွက်ချက်ကိုမဆို ပယ်ချနိုင်သည့် အာဏာရှိနေသည်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် လွှတ်တော်အမတ်များကို ပြည်သူများမှ လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ခြင်းမရှိမချင်း မြန်မာနိုင်ငံသည် စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီ ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ထို့ပြင် တရားစီရင်ရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍများ၌ အဆင့်ဆင့်တာဝန်ရှိသူများသည် တပ်မတော်မှ ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သည့်အတွက် တရားရေးစနစ်သည် တပ်မတော်နှင့် အစိုးရ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်မှ လွတ်လပ်၍အမှီအခိုကင်းမှု လုံးဝ မရှိသည့်အပြင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် လုပ်နိုင်စွမ်းရည် မရှိသောကြောင့် လွန်စွာ အားနည်းနေသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိခြင်းနှင့် ကျူးလွန်သူများအား အပြစ်ပေးအရေးယူခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိသည့် အခြေအနေ ကျယ်ပြန့်စွာ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသည်။
သို့သော် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းများကြားတွင် မြန်မာနိုင်ငံ အသွင်ကူးပြောင်းရေး ဖြစ်စဉ်များကို ဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းရန် ဆွေးနွေးမှုများ၊ သင့်လျှော်သော အရေးယူဆောင်ရွက်မှု ပြုလုပ်နေသည်ကို မတွေ့ရပဲ အချို့သော အခြေအနေများတွင် လေးနက်စွာ ထည့်သွင်း စဉ်စားခြင်း မရှိသောကြောင့် မလိုလားအပ်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်နေသည်။
နိုင်ငံတကာ အစိုးရများသည် ယခုအချိန်တွင် အစိုးရနှင့် များစွာပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုများရှိလာပြီး နိုင်ငံရေးအထောက်အပံ့များ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့များ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး အကူအညီများ များစွာ ဝင်ရောက်လျက်ရှိသည်။
အစိုးရမဟုတ်သော နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ တိုင်းပြည်အတွင်း ပိုမိုများပြားလာသည့်နောက်ပိုင်း ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လူမှုရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် အခြား ကဏ္ဍများကို အထောက်အကူပြုမှုများ မြင့်တက်လာ သော်လည်း ထိရောက်မှု မရှိသောကြောင့် လူထုအကျိုးခံစားခွင့် အလွန်နည်းပါးလျက်ရှိသည်။ ထို့ပြင် အစိုးရမဟုတ်သော နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများသည် ဒေသခံ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လုံလောက်သော ညှိနိုင်းဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်းမရှိပဲ မိမိအစီအစဉ်နှင့် လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်မှုများကြောင့် ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် လုပ်နိုင်စွမ်းများ အားနည်းလာသည်ကို တွေ့ရသည်။ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ အားကောင်းရန် ပံ့ပိုးပေးသည့် အစီအစဉ်များသည် အမှန်တကယ် ထိရောက်မှု နည်းပါးနေပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုများလည်း ရှိနေသည်။
ယခင်အစိုးရလက်မှ ကျန်ရှိနေသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအပါအဝင် အသွင်ကူးပြောင်းရေး ကာလအတွင်း ဖမ်းဆီးခံထားရသော တောင်သူလယ်သမားများနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားသူများကို ချွင်းချက်မရှိ လွှတ်ပေးရန်
အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလ စတင်ချိန်မှစ၍ ပြည်သူနှင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအား ပေးအပ်ထားသော ကတိကဝတ်များကို တာဝန်ယူတာဝန်ခံ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးရန်
ပြည်သူများ၏ဆန္ဒနှင့် အတည်ပြုထားခြင်းမရှိသော ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအား ၂၀၁၅ မတိုင်မီ ဒီမိုကရေစီ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပြီး ပြင်ဆင်ရန်
ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများအပါအဝင် ဥပဒေများကို အများပြည်သူ အလွယ်တကူ လေ့လာနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ ပညာပေးလုပ်ငန်းများအား အလေးထားဆောင်ရွက်ရန်
ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရများအား သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်များမှ တိုက်ရိုက်ရွေးချယ်ခွင့် ရှိရန်၊ ၎င်းတို့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို အပြည့်အဝတိုးမြှင့်ပေးရန်
အသွင်ကူးပြောင်းရေးဖြစ်စဉ်တွင် ပြည်သူများ၊ အရပ်ဘက်လူထုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဒီမိုကရေစီ အတိုက်အခံများ၏ စစ်မှန်၍ အဓိပ္ပါယ်ရှိသော ပါဝင်မှုကို လမ်းဖွင့်ပေးရန်
မြေယာဥပဒေ၊ မြေလွတ်မြေရိုင်းဥပဒေ၊ ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခြင်းနှင့် စီတန်းလှည့်လည်ခြင်း ဆိုင်ရာဥပဒေ၊ ပညာရေးဥပဒေ၊ အလုပ်သမားဥပဒေ စသည့်ဥပဒေများ အပါအဝင် ပြည်သူများအား ချုပ်ကိုင်ဖိနှိပ်သည့် ဥပဒေများကို ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပြီး၊ လူထုအကျိုးကို ရှေးရှုသည့် မူဝါဒများချမှတ်ခြင်းနှင့် ဥပဒေသစ်များ ပြဋ္ဌာန်းရာတွင် ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီစေရေးနှင့် ပြဋ္ဌာန်းသည့် လုပ်ဆောင်မှုအဆင့်တိုင်းတွင် ဥပဒေအလိုက် သက်ဆိုင်ရာ လူထုများအား (ဥပမာ လယ်သမားများ၊ အလုပ်သမားများ၊ ကျောင်းသားများ၊ အမျိုးသမီးများ၊ ဒုက္ခသည်ပြည်သူများ) အပြည့်အဝ ပူးပေါင်းပါဝင်ခွင့်ရှိရေး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်
တရားရေးဝန်ထမ်းများ၏ ဘဝရပ်တည်မှုအတွက် လုံလောက်သော ခံစားခွင့်များ သတ်မှတ်ပေးခြင်းအပါအဝင် အခြားတရားရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်၍ လိုအပ်ပါက တရားရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများကို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စစ်မှန်သော လူထုကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် အစားထိုးခန့်အပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရန်
အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ဥပဒေအား ပါရီအခြေခံမူများနှင့်အညီ ပြင်ဆင်၍ လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်မှု လုပ်ပိုင်အာဏာ၊ ရဲဌာနများနှင့် တပ်မတော်အပါအဝင် မည်သူ့ကိုမဆို လွတ်လပ်စွာ စုံစမ်းစစ်ဆေးခွင့် လုပ်ပိုင်အာဏာ အပြည့်အဝအပ်နှင်းကာ တိုင်ကြားမှုများအတွက် လွတ်လပ်သော တရားရုံး ဖွဲ့တည်ထောင်ရန်၊ ကော်မရှင်နှင့် အရပ်ဘက်လူထုအဖွဲ့အစည်းများကြား အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးမှုများကို ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ပံ့ပိုးရန်
ဖယ်ဒရယ်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီအရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်ကို ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် စဉ်ဆက်မပြတ် လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ် အဆင့်တိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများနှင့် လူငယ်များအပါအဝင် အခြားအရေးကြီးသော လူထုအုပ်စုများပါဝင်နိုင်သည့် အခြေအနေနှင့် ယန္တရားများကို ဖန်တီးပေးရန်
ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများ ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေး တာဝန်ခံလုပ်ဆောင်ရန်
နယ်စပ်ဒေသ အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ ပြည်သူလူထုအား အကျိုးမပြုသော အကြီးစား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီမံကိန်းများကို ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်သည့်အချိန်ကာလတွင်း လုံးဝမပြုလုပ်ရန်နှင့် ဆောင်ရွက်ဆဲစီမံကိန်းများကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်သုံးသပ်ပြီး ဒေသလူထုများ၏ ဆန္ဒအပေါ်အခြေခံ၍ လုံးဝရပ်ဆိုင်းရန်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြောင့် ပြည်သူများအပေါ် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများမဖြစ်ပေါ်အောင် မှန်ကန်သော မူဝါဒများ ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်ရန်
စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းရေးမရရှိမီ ဒုက္ခသည်များအား ပြန်လည်နေရာချထားရေး အတင်းအကြပ် ဖိအားပေးဆောင်ရွက်မှုများ မပြုလုပ်ရန်နှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ကိစ္စကို တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သူ ဒုက္ခသည်များ၊ ဒုက္ခသည်အခြေပြု လူထုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်
ဘာသာပေါင်းစုံ နှီးနှောဖလှယ်မှုအစီအစဉ်များကို နိုင်ငံတော်အဆင့်ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊ အမုန်းပွားစေ သော လုပ်ဆောင်မှုများကို ထိထိရောက်ရောက် တားဆီးအရေးယူမှုများ ပြုလုပ်ရန်၊ အမုန်းမပြန့်ပွား ရေး အသိပညာပေးမှုများကို လုပ်ဆောင်ရန်
အခြားမည်သည့်ဘာသာကိုမျှ အတင်းအကျပ်ချုပ်ကိုင်မှုများ မပြုလုပ်ရန်နှင့် ဘာသာအသီးသီး ကိုးကွယ်သော တိုင်းပြည်အတွင်းရှိ လူတိုင်းအတွက် လုံခြုံမှုရှိသော ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးပေးရန်
လူငယ်နှင့်ပတ်သက်သော စစ်တမ်းများ၊ သတင်းအချက်အလက်များကို ကောက်ယူ၍ လူငယ့်ရေးရာ မူဝါဒများကို ရေးဆွဲချမှတ်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လူငယ်များကို ဦးဆောင်ခွင့်ပေးရန် နှင့် ၎င်းလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော ဘဏ္ဍာရေး အထောက်အပံ့များ သတ်မှတ်ထားရှိရန်
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအပါအဝင် အမျိုးသမီးများအား ခွဲခြားဖိနှိပ်ထားသော တည်ဆဲဥပဒေများကို ပြုပြင်ရန်နှင့် ဥပဒေသစ်များပြဋ္ဌာန်းရာတွင် CEDAW စာချုပ်ပါအချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန်
ပြည်သူလူထုအတွက် စစ်မှန်သော အပြောင်းအလဲ ဖန်တီးနိုင်သည့် လူထုမှဦးဆောင်သော အသွင်ကူးပြောင်းရေးကို အထောက်အkကူပြု နိုင်စေရန် ထိရောက်သော ပြုပြင်မှုများနှင့် ပံ့ပိုးမှုများ ပြုလုပ်ရန်
လက်ရှိအစိုးရနှင့် နိုင်ငံတကာအစိုးရများကြားပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ အကူအညီ အထောက် အပံ့များ ပေးအပ်ခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ခြင်း စသည်တို့အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပြုသည့် လုပ်ငန်းတိုင်းတွင် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများ၏ ရှုပ်ထွေးမှု၊ စီးပွားရေး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်များနှင့် လက်နက်ကိုင်ကဋိပက္ခများကြား ဆပ်စပ်မှုကို အလေးအနက်ထား ထည့်သွင်းစဉ်စား၍ မိမိပါဝင်မှုကြောင့် မြန်မာပြည်သူလူထုကို မထိခိုက်ရအောင် Do No Harm ပေါ်လစီဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ မဖြစ်အောင် ဒေသနေပြည်သူများနှင့် ကြိုတင်တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းမှုများ၊ ကောင်းစွာ ကြိုတင်အသိပေးထားသော ဒေသနေ ပြည်သူလူထုများ၏ လွတ်လပ်စွာ ပေးသိသဘောတူညီချက် (Free, Prior and Informed Consent) အပါအဝင် နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ ကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်
သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေများကို ပြည်သူလူထုထံ အသိပေးဖြန့်ဝေရန်
မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရကဂတိပြုထားပြီး မလိုက်နာသေးသော အချက်များကို အကောင်အထည် ပေါ်လာအောင် ဖိအားပေးရန်
မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရမှကတိကဝတ်ပြုထားပြီး မလိုက်နာသေးသော နိုင်ငံတကာ စာချုပ်စာတမ်းများနှင့် ကတိကဝတ်များ (CEDAW, CRC, UNSCR 1325 and 1820) ကို အကောင်အထည်ဖော်လာရေး ဖိအားပေးတိုက်တွန်းရန်
မြန်မာနိုင်ငံ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည် အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အများပြည်သူ၏ပါဝင်မှုရှိပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန် မြန်မာအစိုးရအား ဖိအားပေးတိုက်တွန်းရန်
ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီမှ ချမှတ်သော မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ဆက်လက်ထားရှိရန်
အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းများ၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ပေးရန်
နိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီနှင့် လူ့အခွင့်အရေး စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ပဋိပက္ခ ပိုမိုကြီးမားစေသော အပြုအမူများ ရှောင်ရှားရန်
မြန်မာအရပ်ဘက်လူထုအဖွဲ့အစည်းများ၏ အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍ၊ လုပ်နိုင်စွမ်းရည်နှင့် တန်းတူခံစားပိုင်ခွင့်တို့ကို လေးစားအသိအမှတ်ပြုရန်
မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်ထက် ဒေသနေအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူထုများနှင့် ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးမှုများမှ ထွက်ပေါ်လာသော အစီအစဉ်များကိုသာ ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုး အကောင်အထည် ဖော်ရန်